Huawei Foni Clone Chinjana Dhata uye Mafaira kuNew Smartphone 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Wakambotenga brand nyowani smartphone uye ikozvino iwe ungade kuendesa rako rese data kubva kune yako yekare nhare kuenda kune yako nyowani? Mhinduro ndeye Huawei runhare dombo, chishandiso chakagadzirwa nekambani inozivikanwa yeChinese, yakakwana, multiplatform uye saka inowirirana nezvose zviri zviviri Android ne iPhone.
Ichi chishandiso chiri nyore kwazvo kune avo vanoshanduka kubva ku iPhone kuenda kune itsva Android smartphone uye, pamusoro pezvose, kune avo vanoshandura yavo Huawei foni kuenda kune imwe mhando (kubvira nhasi mafoni eHuawei zvirokwazvo anotengesa zvishoma pane imwe nguva yapfuura).
VERENGA ZVIMWE:Chinjana data kubva kune imwe Android nhare kuenda kune imwe otomatiki
Con Huawei runhare dombo Zvinogoneka:
chinja data kubva iPhone/iPad smartphone Huawei uye zvinopesana;
chinja data kubva iPhone/iPad smartphone Android uye zvinopesana;
chinja data kubva ku-smartphone Android smartphone Huawei uye zvinopesana;
chinja data pakati pemafoni efoni Huawei.
Chinotamisa mafaera uye data
yo data iyo inogona kutamiswa kuburikidza Foni yakarira zvinotevera:
Nekuchengetedza zvikonzero zvakaiswa ne Android pane data iro kwete inogona kuendeswa:
data kubva kunyorera seWhatsApp;
data mugore: semuenzaniso, mafoto akachengetwa muGoogle Mifananidzo;
Maitiro ekuchinjisa dhata neFoni Clone
1) Kutanga iwe unofanirwa kuisa iyo yemahara app Foni yakarira pazvinhu zvese izvi. Kana mafoni ari maviri Huawei iwe uchawana iyo application yatove kuiswa.
2) Kana iyo purogiramu yadzingwa, inofanira kuvhurwa pane ese mairi uye yakadzvanywa "Kubvuma" Pasi kurudyi;
3) Pamidziyo miviri, kusimbiswa kukwanisa kuwana data rako;
4) Kana iwe uchinge wapa kubvumidzwa pane yako yekare smartphone, iyo kamera ichavhura ichikukumbira iwe kumisikidza a QR kodhiapo uri mu smartphone nyowani uchafanirwa kusarudza yekare foni mhando pakati "Huawei", "Imwe Android", "iPhome / iPad". Sarudza iyo chaiyo uye QR kodhi.
5) Ine yekare smartphone, furemu iyo QR kodhi: kubva pano kuedza kwekubatanidza pakati pemidziyo miviri kuchatanga, ipapo kusimbiswa kubatanidza nemushandisi kuburikidza nepop-up hwindo.
6) Iye zvino unogona kuratidza kuti ndeapi mafaera ekuchinjisa kubva kune yekare smartphone "Kuonekwa"ndidzo dzinokufadza.
7) Dhinda "Chivimbiso" uye maitiro ekufambisa data anotanga otomatiki.
Iko kuendesa data kunoitwa kuburikidza neiyo link yerudzi Wifi zvakagadzirwa kune izvi pakati pemidziyo miviri: iyi nzira ichave iri kuchengetedzeka mi nekukurumidza.
Kana iwe uine yakawanda data, iko kutama kwacho kunogona kutora maminetsi akati wandei, asi nguva yasara chiratidzo chinoramba chichioneka pachiratidziri. Kana kubatana pakati pemafoni efoni kukakanganiswa, maitiro acho anodzokororwa uye kuchinjiswa kuchazotangazve kubva kwazvakamira.
VERENGA ZVIMWE: Chinja kubva kuApple uchienda ku iPhone uye uchinjise data rese
Shandisa ephemeral meseji paWhatsApp, iyo inonyangarika mushure memazuva manomwe
Ungachinja sei font paHuawei smartphone
How kukiya iPhone, nzira dzose
Maitiro ekuchinja kubva kune yekare iPhone kuenda kune itsva
Maitiro ekugadzira yakavanzika YouTube chiteshi yemhuri, shamwari uye vatinoshanda navo
Maitiro Ekugadzira Anonakidza Mapfupi Mavhidhiyo ane Instagram Reels
Zviratidzo uye akasarudzika mavara ane iyo keyboard
Kunyorera kuongorora vana vari kunze kwemusha
New Android foni? Maitiro ekupfuudza rese data kubva kune yekare foni
Maitiro ekucheka vhidhiyo paWhatsApp
Maitiro eku dhawunirodha mafaera eAPK kubva kuApple application